Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Ụmụaka gị na Tielemans Akụkọ Nke Na-emeghe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Football nke kacha mara amara "Ndị Tielemans". Akụkọ nwata anyị Yoie Tielemans gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ụkwụ ya abụọ na agba ya. Agbanyeghị naanị ole na ole na-atụle Youri Tielemans 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Youri Tielemans Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Youri Marion A. Tielemans a mụrụ na 7th ụbọchị nke May 1997 na Sint-Pieters-Leeuw, Belgium. A mụrụ ya nna nke Flemish na nne nke Congo.
A mụrụ Youri Tielemans nye ndị nne na nna ndị amachaghị banyere ha.
Akpụrụ ndị Belgium na agbụrụ ndị Africa na nke German welitere na Sint-Pieters-Leeuw n'èzí Brussels ebe o tolitere ya na otu nwanna nwoke na nwanna nwoke nke tọrọ ya bụ onye a ma ama n'oge ederede.
A zụlitere gị Tielemans na Sint-Pieters-Leeuw na mpụga Brussels, Belgium.
N'ịbụ onye na-etolite na ebe a mụrụ ya, ụmụaka Tielemans bụ ndị na-adịghị mma na ezinụlọ ya n'ihi na ndị mụrụ ya na ụmụnne ya bụ ndị na-elekọta Judo bụ ndị na-elekọta obere egwuregwu.
Ọ bụ ezie na ndị Tielemans nwetara ọzụzụ dị ukwuu na Judo, football bụ ebe obi ya dị. Ọ malitere igwu egwuregwu ahụ ogologo oge mgbe ọ mụtara ịga ije na n'oge na-adịghị anya nkwado ndị nne na nna ya debanyere ya na Anderlecht agụmakwụkwọ mgbe ọ dị afọ ise.
Youri Tielemans Nwatakiri Akụkọ nke Na - Nkụzi na Bulọ Ọrụ:
Mgbe ha nọ na mahadum Anderlecht, Tielemans jikọtara agụmakwụkwọ na -arụ ọrụ nke ọma na nrụpụta ọrụ na bọọlụ nke njikọ aka abụọ jikọtara ibe ha.
Mgbe ọ bụla a gwara Tielemans ka o dee edemede banyere ọdịnihu ya, nwata ahụ ga na -edetu ọhụụ ya banyere bọọlụ yana ịkọwapụta agwa ndị o nwere iji mezuo nrọ ya.
Youri Tielemans ga - ede banyere ọdịnihu ya na football n'oge ọ bụ nwata.
N'adịghị ka ndị ọkachamara n'ọtụtụ ọkachamara, ndị ọkachamara nke Tielemans anaghị akwụsị n'oge ọ dị afọ iri na ụma. Ọ gara n'ihu inweta akwụkwọ diplọma n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Sint-Guido Institute School na Anderlecht ebe ọ na-amụ akwụkwọ.
Youri Tielemans Biography - Ndụ Mmalite Ndụ na Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mkparịta ụka n'etiti agụmakwụkwọ na ịgba bọọlụ maka Anderlecht adịghịrị ndị Tieleman mfe.
Ọ bụ ezie na Anderlecht belatara ụbọchị ọzụzụ nke Tielemans chọrọ ka ọ nweta, mmepe ahụ chọrọ ka onye egwuregwu bọọlụ ga -agbasi mbọ ike ka ya na ndị ọgbọ ya na -enweghị ọzụzụ ọ bụla.
N'agbanyeghị nke ahụ, ndị Tielemans meriri nsogbu ndị ahụ site na ịrị elu n'ọkwá. Ka ọ na-erule oge Tielemans dị afọ 16 na 2013, ọ nwetara oku mbụ ya na ndị otu egwuregwu Anderlecht dị ka onye na-anọghị na ya n'oge nnọkọ klọb 1-0 meriri Genk na 2013 Belgian Super Cup.
Youri Tielemans kpọrọ oku mbụ na Anderlecht mgbe ọ dị afọ 16.
Youri Tielemans Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Otu izu mgbe ọ natara oku mbụ ya na squad, Tielemans mere mbụ ya na Anderlecht dị ka onye na-anọchite anya ya n'oge megidere Lokeren na oghere mmepe nke oge Belgian Pro League.
Na mpụta mbụ, Tielemans ghọrọ onye ọkpụkpọ ikpeazụ nke akụkọ ntolite. Ọ gara n'ihu ịtọọ ndekọ ọzọ site na ịghọ onye ọkpụkpọ Belgian nke kachasị na-egwu egwu na UEFA Champions League mgbe ọ malitere na egwuregwu megide Olympiacos mgbe ọ dị afọ 16 na 148 ụbọchị na 2 October 2013. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Youri Tielemans Mmekọrịta Ndụ:
Ndị Tieleman gị na-alụrụ di na nwunye n'oge ederede. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara akụkọ gbasara nwoke na nwoke na nwoke na nwanyị. Iji malite, Tielemans amaghị na ọ bụ enyi nwanyị ọ bụla tupu ya ezute nwunye ya bụ Mendy.
Youri Tielemans ya na nwunye ya Mendy.
A maghị mgbe di na nwunye zutere ma ọ bụ lụọ. Otú ọ dị, ọ bụ nwa nwanyị mara mma bụ Melina gọziri njikọ ha. A mụrụ ya na midfielder mgbe ọ bụ 19 afọ na 2017.
Youri Tielemans na nwa ya nwanyị Melina.
Youri Tielemans Ndụ Ezinụlọ:
Ndị Tielemans sitere na ezinụlọ ndị dị n'etiti. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere nna Tielemans: A mụrụ Tielemans na nna nke Flemish. Obere ọrụ nna nna amaghi ama bu onye nkuzi na onye nkuzi Judo. Obi abụọ adịghị ya nso na ndị Tielemans na-ekwu okwu banyere ya na ezigbo ọkụ.
Banyere nne Tielemans: Nne Tielemans bụ onye Congo. Dị ka di ya, ọ na -arụ ọrụ dị ka onye nkuzi na onye nkuzi Judo.
N'ịbụ onye a maara dị ka onye mmeri nke agụmakwụkwọ, nne Tielemans anaghị elebara egwuregwu bọọlụ anya wee hụ na etinyere okwu gbasara ọdịmma agụmakwụkwọ ya na nkwekọrịta mbụ ya na Anderlecht binyere aka.
Banyere ụmụnne nwanne Tielemans: Amabeghị ọtụtụ ihe banyere nwanne nwoke na nwanne nwanyị Tielemans bụ ndị jere ụzọ nne na nna ha na-eme Judo. Ka o sina dị, ha na nwanne ha nwoke nwoke nwere mmekọrịta chiri anya bụ onye kwadoro onwe ya dị ka onye maara ihe n'egwuregwu football.
Urimụ nwanne gị Tielemans na-etinye aka na Judo.
Banyere ndị ikwu Tielemans: N'ebe ezinụlọ Tielemans nọ, amachaghị banyere nne na nna nna ya yana nna nna na nne.
N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ nke nwanne nna Tielemans, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya ebe amatabeghị ụmụ nwanne nna ya na ihe ndị ama ama n'oge ọ bụ nwata ruo taa.
Youri Tielemans Ndụ Nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Youri Tielemans akara?. Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke ụdị ndị Tielemans iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, Tielemans 'persona bụ ngwakọta nke àgwà Taurus Zodiac.
Ọ na -ewebata ya, nwee oke agụụ, na -eso ụzọ ma na -egosighi nkọwa gbasara ndụ ya na nke onwe ya.
O nwere ọtụtụ mmasị na ihe omume ntụrụndụ nke gụnyere ime judo, ịkụ basketball, ịzụ ahịa, ịge egwu, ikiri telivishọn, igwu egwuregwu vidio na iso ndị enyi na -anọ.
Ime Judo bụ otu n'ime ihe omume ị ga - eme Youri Tielemans.
Ndụ Tielemans Youri:
Ndi netiwu Tielemans net-worth still still under review. Otú ọ dị, ọ nwere uru ahịa nke £ 19.80m n'oge ederede. Isi mmalite nke Tielemans bụ akụ na ụba a ma ama na-enweta site na ụgwọ ọ na-enweta dị ka ọkpọ bọlbụ na ego sitere na endorsements.
N'ịbụ onye na-asọ oyi nke ukwuu, ndị Tielemans na-ebi ndu ndụ na-adịghị agbanwe agbanwe, ya mere ọ dị ntakịrị ihe a maara banyere ọnụ ahịa ụlọ ya dị na Sint-Pieters-Leeuw. Banyere ụgbọala ndị ụgbọala ya, Tielemans nwere Black Audi ma buru otu foto na nso ụgbọ ala.
Youri Tielemans nwere Audi n'etiti obere ụgbọala ndị ọzọ amaara ama.
Youri Tielemans Eziokwu Akụkọ Eziokwu:
Iji kechie anyị Tielemans Ụmụaka akụkọ na biography ebe a bụ ọtụtụ eziokwu na-adịkarịghị gụnyere ya bio.
Ndị Tielemans gị nwere eriri Blue na Judo. Ọ dị nanị ọkwa abụọ site na inweta belt belt tupu ya akwụsị egwuregwu ahụ.
O nwere obere egbu egbu na njedebe nke aka ekpe ya.
Amabeghị ihe banyere okpukpe Tielemans dị ka onye na-ekwu okwu n'etiti anaghị ekwu okwu banyere nkwenkwe ya dị ka n'oge ederede.
Achọpụtaghị ndị Tieleman ịṅụ mmanya, a naghị enyekwa ya ịṅụ sịga dị ka n'oge ederede.
Ezigbo Ndị Tielemans Biography Video:
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Youri Tielemans Childhood akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Akụkọ nwata Ralf Rangnick gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ